Shintsha izithonjana zamafolda ethu eGnome | Kusuka kuLinux
Shintsha izithonjana zamafolda ethu eGnome
Izolo ngivakashele umakhelwane osebenzisa iWindows XP kwikhompyutha yakhe ukumsiza ngenkinga abenayo futhi ngibonile ukuthi ifolda ngayinye kwi-disk D: ibinophawu oluncane olunenhlonipho ukuyenza ibe ngokwakho.
Yenza lokhu nge Nautilus (Imenenja yefayela ye- I-Gnome) ilula impela futhi akudingeki sisebenzise noma iyiphi isoftware eyengeziwe noma enye into enjalo. Ukuphela kokufanele sikwenze:
1- Sikhetha ifolda esifuna ukuyenza ngezifiso »Qhafaza kwesokudla bese uqhafaza kusithonjana sefolda.
2- Sibheka isithonjana ngaphakathi kwefolda yethu .icons, noma simane sikhethe noma yiliphi ifomethi ngefomethi .png, .jpg, noma .svg (ezinye zingasetshenziswa). Lapha ungathola ezinye ezipholile kakhulu. Futhi ngomumo !!!
Le yindlela engibukeka ngayo eyami 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Shintsha izithonjana zamafolda ethu eGnome
Ahaha ngiyakhumbula ukuthi lokhu kungenye yezinto zokuqala engizithandile ngeLinux, emawindini bekuyindumezulu ngempela ukushintsha lokhu.
Ngiyabonga, njalonjalo ibhulogi yinhle kakhulu, ngiyilandela nsuku zonke.
Wamukelekile, lezi yizinto abasebenzisi abasha abashaywa ngazo futhi kungenxa yabo engibhale le ndatshana. 😀
Nami kwenzeka okufanayo. Ngikhumbula ukuthi kufanele ngibheke kufolda enezithonjana ezingapheli futhi kungathatha amahora lapho. Heh heh
Ukube bengiyi-KZKG ^ Gaara bengizothatha ikhompyutha yakho ukufaka izithonjana zobungqingili kuJu $ tin Bieber noma kumaJonas Sisters haha.
Iqiniso ukuthi eHasefroch bekungabonakali kuyinkimbinkimbi kangako
Futhi ngimbulala njengenja .. Justin Bieber? .. Ungangifaki *****
I-Blueman: Phatha amadivayisi wakho we-Bluetooth
Ithiphu: imenyu ye-xdg ayisebenzi ku-Openbox